Intle, i-villa ehlaziyiweyo ukusuka kwi-1929 incl cottage
Indlu entle endala ebuyiselweyo kwaye yandiswa. Ngoku inamagumbi asixhenxe kunye nendlwana, apho igumbi elincinci elingenalo igumbi lokuhlambela langasese. Ikhitshi encinci yokutyela, ifriji kunye neveranda enkulu enemibono emangalisayo. Iindlela ezininzi ezintle zokuhamba, igumbi elikhulu leentlanganiso, i-whirlpool spa (SEK 200-300 ngebhafu nganye, i-2-6 yokuhlamba) yenza le ndawo yokuhlala ibe yinto efanelekileyo kubantu abafikelela kwi-22. Indlu ikwilizwe elikufutshane noololiwe, iHelsingborg kunye neLandskrona.
Ewe siyakwamkela iindwendwe ze-LGBTQ kwaye sihlala kwisihlomelo esisithekileyo.
Ngothando ipropathi yezitena ezihlaziyiweyo ukusuka 1929. Embindini wengingqi ye-Öresund eqengqelekayo enemisinga kunye namachibi amancinci ajikeleze ikona kodwa nesikhululo seenqwelomoya. Iindawo ezimangalisayo nezamasiko zesidlo sasemini kwilali ekufutshane kunye nevenkile edumileyo "Enkla ting" kunye necafe "Flinkmans cafe". Le ndawo inamagumbi asixhenxe kunye nendlwana apho onke amagumbi ngaphandle kwelinye anegumbi lokuhlambela labucala. Ipropathi inomlinganiselo wabantu abangama-22 kodwa ifumene abantu abangama-45. Njengokhetho, i-whirlpool spa ingasetyenziswa, enendawo yabantu aba-6. Ecaleni kwe-conservatory ye-50 sqm, kukho ikhitshi edibeneyo enezixhobo zokutyela kunye negesi kunye nepleyiti yombane kunye nefriji kunye nefriji kumgangatho ongaphantsi.
Amathuba awodwa okuvuza kunye nokuphuhlisa ukuzonwabisa:
1. Indawo ephawulwayo "iStenkärlsfabriken" kunye neonti yayo enkulu ehlaziyiweyo esasetyenziswayo. Indawo yokutyela entle kunye nevenkile kunye nezifundo zokujika.
2. Iindlela zebhayisekile ezimangalisayo kwiindawo eziqengqelekayo
3. Iindlela ezithandekayo zokuhamba
4. Kufuphi nolwandle, Ålabodarna, Ven, Söderåsen National Park, Knutstorp ring.
5. Ivenkile / ikhefi / igadi edumileyo "Izinto Ezilula", imizuzu eyi-10 yokuhamba.
6. Flinkmans Cafe (Emva kobumnyama), inqaba yekitsch, eTågarp, imizuzu esi-8.
7. "Kostallet" kunye noyilo lwangaphakathi lwaseScandinavia.
8. Tomatens Hus kunye yokutyela yayo egadini emangalisayo (kwaye yokutyela kwindlu entsha yeglasi), 8 min ngemoto.
9. "Greta Pott" i-studio yokuguqula, umsebenzi ogunyazisiweyo, iikhosi zokuguqula, ukuguqula iziganeko, i-6 min ngemoto.